Maitiro ekutarisa chaiwo muzana yeiyo iPhone X bhatiri | IPhone nhau
Chinhu chinonyanya kushamisa nezve iyo iPhone X ndiyo kubvisa bhatani repamba pazasi uye hombe skrini isina mafuremu. Izvi zvinoshandurwa zvine zvayakanakira nezvayakaipira. Imwe yekukanganisa kwayo ndeyekuti notch iri kumusoro inotyora nzvimbo yemabhawa ichisiya isina nzvimbo yenguva, kufukidza uye zvimwe zvishoma zvimwe zvinhu.
Kusvika ikozvino nechinhu chero cheApple chataigona tarisa chaiko bhatiri muzana muchimiro chemufananidzo pamwe nehuwandu hwayo padyo padhuze neiyo bhatiri icon mune mamiriro bar. Asi pane iyo iPhone X haigone kutaridzwa chero paIOS. Heano maitiro ekuziva iyo bhatiri muzana kune yako nyowani kifaa.
Apple inoganhurira chaiyo bhatiri muzana kune zvine hungwaru nzvimbo pane iyo iPhone X
Vashandisi vagara vaine chishandiso mumaoko avo vanovimbisa izvozvo bhatiri rinoshamisa, zvirinani kupfuura mamwe madiridzwa. Nezuro chaiye, apo nyanzvi dzakaputsa iPhone X vakaona kuti maive nemabhatiri maviri mukati, saka zvinogona kuve chimwe chezvikonzero nei kuzvimiririra kwechigadzirwa ichi kuchizowedzerwa.
Sezvandaitaura, iyo chaiyo bhatiri muzana Iyo ine nyore kuwana pane iyo iPhone X asi, seyakajairika mutemo, isu hatizokwanisa kuiona chero kupi kubva iyo notch idya yakawanda yeiyo status bar. Kuti utarise muzana, ingo tevera anotevera matanho:
Kana iwe uine iPhone X edza kuivhura uye uwane iyo yekumba skrini. Ukatarisa kumusoro kurudyi kwechigadzirwa uchaona iyo bhatiri icon, yaunogona kuwana nayo pfungwa yekuzvimiririra inosara. Asi iwe unogona kuona kuti yako chaiyo muzana haina kuwanikwa padhuze newe.
Usatarise chero marongero mune iOS 11 Zvirongwa se Apple yakaganhurira nzvimbo dzaunogona kutarisa chaiko bhatiri muzana. Ndekupi kwatinofanira kuenda kubva zvino zvichienda mberi? KuControl Center.
Iyo Control Center mufoni nyowani yeApple ndeyekutsvedza chigunwe kubva kumusoro kwescreen kusvika pasi. Kana tangove mukati, tichaona iyo chikamu padyo nekomboni bhatiri iyo yaimbove isina muzana.
Patinobva kuControl Center iyo data yeruzivo ichanyangarika uye kuti tiongororezve isu tichafanirwa kukumbira iyo Center Center zvakare. Iri zano neApple rave richidikanwa kuti zvine musoro zvigovera mamiriro ezvinzvimbo kusati kwaiswa iyo notch uye chidzitiro chikuru chisina mafuremu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutarisa chaiwo iPhone X bhatiri muzana
Izvo ndezvedu ini mune ramangwana kugadzirisa kweiyo Apple ichakwanisa kuwedzera iyo muzana mukati mebhatiri kuitira kuti igone kugara ichioneka, ndicho chinhu chandaigara ndichida kuti chishandiswe (kubva kune yangu iPhone 3G) uye zvinoita kunge chaizvo zvinosuruvarisa kuti mune nyowani nyowani iPhone X matanho akati wandei anofanirwa kutorwa kuti aone iro REAL bhatiri rasara.
Animoji Karaoke inopinda internet